Namoaka fanambarana ny hetsiky ny mpitondra fivavahana
2009-12-28 @ 11:36 in Ankapobeny
"Ary nony nahita ny vahoaka i Jesoa, dia nahonena Azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry". (Matio 9:36)
"Efa hitako tokoa ny fahorian'ny oloko,...ary efa reko ny fitarainany,...eny, fantatro ny alahelony" (Eksodosy 3:7)
Hita sy re ary fantatr'Andriamanitra ny fahorian'ny vahoaka Malagasy, ka tsy sahinay Mpitondra fivavahana ny hanampi-maso tsy hijery izany. Efa mby an-koditra ny fahantrana ho an'ny maro an'isa. Tsy mila ho porofoina na tadiavina ny anton'izany fa miharihary tahaka ny tafika andrefan-tanàna dia ny krizy lavareny izay hita ho iniana ampitarazohana. Manjaka hatraiza hatraiza ny tsy fahamarinana ary tsy afenina intsony ny fanaovana izany fa atao an-karihary. Azo tanisaina ny fisehon'izany, toy ny lainga sy ny fitaka iniana afafy eny amin'ny fampahalalam-baovao, ny kolikoly, ny fizarana vola etsy sy eroa, ny fampihorohoroana ny vahoaka, ny fisamborana ny olona tsy mitovy hevitra amin'ny tena, ny fampidirana am-ponja noho ny antony politika sy ny maro hafa tsy voatanisa.
Mikiakiaka sy mitaraina miantso vonjy ny vahoaka nefa toa tsy misy mpihaino. Tsy afaka mangina ary tsy hangina manoloana izany izahay Mpitondra fivavahana, amin'ny maha-Raiamandreny sy Mpitondra ny Tenin'Andriamanitra ho an'ny mpiara-belona. Izany no ijoroanay ankehitriny mba hiteny amin'ny fahitsiana sy ny fo madio, mampandefitra izay mety ho fironana amin'ny maha-olombelona.
Koa manoloana izao zava-misy eto amin'ny firenena izao, dia ambaranay am-pahamarinana sy am-pahasahiana ireto:
1. "Fa atolory ny tenanao ho an'Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian'ny fahamarinana ho an'Andriamanitra" (Romana 6:13b)
Ny fahalalahana sy fahafahana miteny ary maneho hevitra dia zo fototra sady arovan'ny lalàna nomariky ny fahafahana syny fahamarinana eto amin'ny firenena, koa ambaranay fa ny famefena izany na fanararaotana izany hanimbana ny fihavanana dia fanitsakitsahana sy fahamarinana tsotra izao. Noho izany dia:
Takinay tsy misy hatak'andro ary tsy misy fepetra ny hamelana ny Radio Fahazavana hanao vaovao (Journal palé) sy hamerenana ny fandaharana Ampenjiky ary ny hampitoviana ny fitondrana ireo Radio na Televiziona rehetra, raha misy ny fihoaram-pefy. Ny fisian'ny hevitra marolafy dia fanoitra hampandroso ny firenena.
Takianay ho mariky ny fahafahana sy ny fahamarinana ny hampiasana ny Televiziona sy ny Radiom-panjakana ho an'ny rehetra, milaza ny vaovao rehetra sy marina, tsy mitanila, ho modely amin'ny fanajana ny mpiray tanindrazana sy ny fifanakalozan-kevitra na iza na iza no mitondra ny firenena.
2. Hoy ny Soratra Masina: "Aleo fahendrena toy izay hery" (Mpitoriteny 6: 16a)
Am-pitiavana no iantsoany izay manana fahefana hoe : Atsaharo ny fitondrana ny firenena amin'ny hery fa tena tsy mahasoa ny firenena mihitsy izao! Aoka tsy hatao fomba fiasa sy foto-pisainana hitondrana ny vahoaka ny fampihorohoroana sy fampiasana fitaovam-piadiana hampanekena azy, ny fisamborana sy fanagadrana, izay tsy ahitam-bokatra ankoatry ny lonilony sy fifankahalana. Ny fitondrana miorina amin'ny herisetra dia miafara amin'ny herisetra. Ny tena fahendrena dia mifanakalo hevitra sy mifampihaino ary tsy atakalo tombontsoan'olom-bitsy izany. Io ihany no lalana tokana ivoahana amin'ny krizy sy ny fahasahiranana rehetra.
Noho izany dia hamafisinay etoana ny antso avo efa nataonay ho an'ny:
Miaramila, mba tsy hiandanianareo na amin'iza na amin'iza amin'izao fisarahan-kevitra eto amin'ny firenena izao, ny tsy handraisanareo anjara amin'izay fiehtsika mety hampahory ny vahaoaka, amin'ny maha-olon'Andriamanitra anareo. Ampahatsiahivinay fa nomena fahefana hiaro ny vahoaka sy ny fananany hianareo fa tsy sanatria handika ny didin'Andriamanitra hoe "Aza mamono olona". Averinay indray izany antso izany satria hita tato ho ato fa miditra amin'izany fampiasan-kery izany indray ny firenena ary manana anjara toerana lehibe amin'izany ianareo.
Ny mpitsara mba hanao ny asanareo am-pahamarinana, amin'ny maha-kristiana ny maro aminareo, ka ho aron'ny osa sy ny malemy tokoa. Takianay ny hampitsaharana avy hatrany ny fifanenjehana sy ny fifankahalana, ny valifaty, ka mety hanaovana ny fitsarana ho fitaovana hanatanterahana izany.
Ny vahoaka mba tsy hirona amin'ny fampiasan-kery ka hihevitra izany ho hany vahaolana mety hahomby. Antsoina ny rehetra hahay hifandamina sy hifamela heloka ka tsy hanaiky ampiadiana amin'ny mpiray tanindrazana, handresy ny fironana sy ny fitadiavam-bola fa hanandratra avo ny fihavanana amin'ny maha-malagasy sy maha-Kristiana antsika.
Ny mpanao politika hiverina hifampidinika fa tsy hitondra ny vahoaka any amin'ny lojikan'ny ady an-trano toy izao, sanatria! Ambaranay fa ny fiziriziriana tsy hitady izay hanalana ny firenena amin'izao fahasahiranana manjo azy izao dia efa fanimbana ankitsirano ny firenena. Anterinay ny fahavononanay: hivavaka, hampahery sy hiasa, ho Raiamandreny sy elanelam-panahy ho amin'izany fifampidinihana izany, raha ilaina.
Izao no hafatry ny Tenin'Andriamanitra ho antsika: "Satria izay misy fialonana sy fifampiandaniana dia misy fikorontanana mbamin'ny asa ratsy isan-karazany. Fa ny fahendrena avy any ambony dia voalohany indrindra madio, ary koa tia fihavanana, mandefitra, mora ifampiraharahana, be famindrampo sady mahavokatra asa soa, tsy miangatra, tsy mihatsaravelatsihy. Izay mampanjaka fihavanana dia mamafy am-pihavanana, ary dia ny rariny no vokatra azony" Jakoba 3:17-18 (Diem)
Amin'ny maha-Mpitondra fivavahana anay dia takianay amin'ny herinay rehetra ny hampitsaharana tsy misy hatak'andro ny antsonjay rehetra atao amin'ny fiangonana, toy ny fandrahonana sy fakana ny fananany, fandrarana ny Radio-ny (Fahazavana) tsy hilaza vaovao, ny fandrahonana sy nikasihan-tanana Raiamandrenim-piangonana. Toherinay! lavinay noho ny amin'ny Tompo izany fomba tsy mendrika sy tsy manaja ny fahamarinana izany ary hiantsoanay ny vahoaka Kristiana rehetra hijoro am-pahamarinana, hanohitra izany.
Mijaly loatra ny vahoaka ka tsy maintsy mitady lalana hivoahana amin'izao fahasahiranana izao isika. Asa maro no efa votsotra ka olona maro no tsy an'asa sy mbola ho very asa, iainana ny fifandrafiana sy fankahalana, ny tahotra sy tebiteby,misy anefa ireo tsapa ho mitombo harena vetivety, tsy maty manota. Raha mbola ikirizana izao fomba ratsy izao ary iniana tsy karohina ny vahaolana dia vonona izahay Mpitondra fivavahana hirotsaka amin'ny lalina koa amin'ny fandraisana andraikitra, ho an'ny vahoaka sy ny firenena. Am-panetre-tena lehibe sy am-pahasahiana noho ny fahatokiana ny herin'Andriamanitra no ijoroanay hatramin'ny farany, raha ilain'ny Fiangonana sy ny firenena izany.
Dia hoy izahay Mpitondra fivavahana, hoe :
"Tsy hangina Aho noho ny amin'i Ziona, ary tsy hitsaha-miteny Aho noho ny amin'i Jerosalema, Mandra-piposaky ny fahamarinany tahaka ny famirapiratry ny mazava" (isaia 62:1)
"RAHA MANGINA IREO DIANY VATO NO HIANTSOANTSO" (Lioka 19:40)